ROOBAAFI ROOBEE-Baacoo Bifa waliin dubbiin qindaa’e-Feeyyiftuu Tolasaa’tiin – Beekan Guluma Erena
ROOBAAFI ROOBEE-Baacoo Bifa waliin dubbiin qindaa’e-Feeyyiftuu Tolasaa’tiin	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE May 5, 2016May 5, 2016OROMO
33SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
ROOBEE FI ROOBAA !!!!!
Baacoo kana barumsa akka irraa argattan hin shakku. Yeeroo baay’ee fakkeenyi kun deddeebi’ee waan mul’atuuf karaa kanaan ibsa gochun dirqame !!
Roobaa → Akkam bulte ? Roobee!
Roobee→ fayyaa kooti Jirtaa? Roobaa !
Roobaa →nagaadha galata waaqaa. Yoo Eeyyamamtuu taate, wayin siin jechuu barbaade.
Roobee → Tole rakkoo hin qabu Roobaa.
Roobaa → Eegaa dhiifama naaf godhi. Ani waanin namarraa jibbe tokko kallacha namatti himuun jaaladha na beektaa?
Roobee → Maalin balleesse? Daf- natti himi kaa.
Roobaa → Ilaa Roobee ! “Dallaan namaa safuu qaba. Intalli namaa dallaa cabaa Yoo argiteyyuu,Yoo danda’ame citaa lafaa fuutee itti suuqxi, malee qoraaniif jettee, itti Ejjettee, ka..ka gootee, galchitee hin bobeessitu. Inni darbe darbe, si’achiif gara fuulduraatti itti hin deebi’iin !!”
Roobee → “Uuuu Ani moo? Anumtti Roobeen moo? Akkanatti badu kaa yaa intala Abbaa gurraachaa !! Maa sobda Roobaa? Eessatti na argite? Eessa dhaabbattee na argite?”
Roobaa→ ilaa Roobee !…Ati na arguus dandeessa. Na arguu dhiisuus danddeessa. Ani Garuu si ARGEERA. Dallaa gaashee Dhaabasaa, kan inni naannessee garbuu isaatti ijaare sana osoo ijji koo si arguu caccabsitee kaasuutti fuutee qajeelte.
Roobee →Hin sobiin , Ani dallaa namaa caccabsuu dhiisiitii hanxaxii tokkittii dallaa namaa jalaa fuudhee hin beeku. Hin sobiin na hin arginee. Yoo didde immoo hojii keen gadi sii guura.
Roobaa → mee gadi guuri mee. Maaliidha inni ??
Roobee → Beekaan siif dhokse malee guyyaa tokko Horiin Eegaa jira, laga dhuftee farda warra Obboo qalbeessaa hattee, gabaa ittiin dhaqattee, galgala fiddee horii keessatti gad-dhiifte. Ani kanan siif dhoksee jira bar. Garuu Ati Roobeen si hin argine seete.
Roobaa → himmm !! Yoomi kun??
Roobee → Guyyaansaa kamisa garuu torban isa kam keessa akka ta’e hin yaadadhu.
Roobaa → maal Odeessitii ? Maal Ofin wallaale moo? Mee dubbii sobaa dhiisi !
Roobee → soba miti qaroo kootiinan si arge !
Roobaa →Eessatti kun? Mee maal hojjettaayyu yeroo sana?
Roobee→ Laguma horii itti bobbaafnu sana. Maasii warra Gaashee Dabalaa qarqara, muka heexoo guddaa sana jalan taa’ee mugaayyuu, bokkaan tokkos xiqqoo ni tittiiftti !
Roobaa → Kkkkkkkkkkk Raajiidha ! Soba kee Atuu ofirra calaqqisiifte bar. Eerga mugaa jiraattee, Akkamiin na argiteree? Moo Abjuu dhalaata??
Roobee→ na dhiisi dubbiin na gahee !!
Roobaa→ Hundaafuu Ati waanin siin jedhe sana, hojiirra Oolchi. Kan biraa immoo nama hin argine. Jedhi malee, namni na hin argine hin jedhiin. Nagaatti !
Roobee → Eerga Roobaan deemee booda. Himmm !! Eessuma dhaabatee na argelaa ijji isaa haa jaamu. Itti himaa laata? badee!
Dhuguma immoo jedhe. Namni na hin argineen soba !!!!
Fayyiftuu Tolasaatiin !!!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa33SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← WALIIN DUBBII KUMAAFI KUMEE MARSAA 2ffaa-Wabii Xilahuuniin
DHIMMOOTA YAADA FALMII OBBO GIRMAA XUMURAARRATTI YAADA DHIMMAMTOOTAA (Activists) →